अर्थमन्त्रीले ल्याए नयाँ नियम, राती आठ बजेपछि चुरोट र मदिरा बेच्न नपाइने ! - Everest Dainik - News from Nepal
अर्थमन्त्रीले ल्याए नयाँ नियम, राती आठ बजेपछि चुरोट र मदिरा बेच्न नपाइने !
१८ वर्ष मुनिकालाई किन्न,खान निषेध !
काठमाडौं, माघ ४ । सरकारले मदिरा र चुरोट विक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । राती ८ बजेपछि मदिरा र चुरोट बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी तयारी गरेको हो । १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकाहरुले कुनैपनि समय मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थ किन्न नपाउने नियम ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले थालेको छ ।
याे पनि पढ्नुस जनता सचेत भईसके समृद्विको पक्षमा लाग्छनः कृष्णबहादुर महरा
यस्तो नियम आगामी बैशाख १ गतेबाट लागु हुने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सामाजिक सुधारका लागि मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको विक्रीमा कडाई गर्न लागेका हुन् । अर्थले यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिरहेको उप्रप्रधानमन्त्री महराका प्रेस संयोजक त्रिभुवन पौडेलले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस सभामुखद्वारा सम्बन्धित मन्त्रीहरुलार्इ ‘रुलिङ’
मन्त्री महराले तयार पारेको ‘सम्मृद्ध नेपाल र दीगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्ययोजना’ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र त्यसभित्र रक्सी र चुरोट बिक्रीमा कडाई गर्न लागिएको प्रेस संयोजक पौडेलले बताए ।
मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको खुला बिक्री र उपयोगले समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै सुधारका लागि यस्तो नियम ल्याउन लागिएको मन्त्रीले बताएका छन् । त्यस्तै अर्थले मुल्य अभिवृद्धि कर कडाइका साथ लागु गराउन ठूला व्यापारिक घराना र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा पनि अनुगमनलाई तीव्र पार्ने भएको छ । भ्याट छली र राजश्व चुहावटका खबरहरु पछिल्ला समय धेरै आएकाले अनुगमन बढाउन लागिएको पौडेलले बताए ।
याे पनि पढ्नुस क्यान्सर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार केन्द्र बनाउनुपर्छः सभामुख महरा